GRIM TALLY Britain izao no manana tahan'ny fahafatesan'ny Covid avo indrindra eto an-tany miaraka amin'ny fahafatesan'olona 935 isan'andro, fikarohana hita
NY UK izao dia manana ny taha ambony indrindra amin'ny coronavirus manerantany, hoy ny fanadihadiana iray vaovao. Nahatratra ny Repoblika Tseky i Angletera, izay nahita ny Coviddeaths betsaka indrindra isaky ny capita nanomboka ny 11 Janoary, raha ny angom-baovao farany. Angletera no manana ny tahan'ny maty Covid avo indrindra eto an-tany, miaraka amin'ny ...
Dr Hilary an'ny GMB dia nametraka fampitandremana fatratra momba ny fahazarana amin'ny fivarotana lehibe 'maninona no miatrika ny risika?'
Mampitandrina ny mpijery ny Dr Goodary Britain's Dr Hilary Jones mba hitandrina amin'ny fivarotana lehibe ary tsarovy fa tsy haka entana ary hamerina azy ireo avy eo. Dr Hilary dia niara-nidinika tamin'ny mpikarakara an'i Piers Morgan sy Susanna Reid raha mbola mila mitandrina ve isika amin'ny mety hiparitahan'ny ...
Vao tsy ela akory izay, mpiara-miasa iray ao amin'ny ozinay dia nanambady, ary ny mpiara-miasa aminy rehetra dia faly tamin'izy ireo
Vao tsy ela akory izay, mpiara-miasa iray ao amin'ny ozinay dia nanambady, ary ny mpiara-miasa aminy rehetra dia faly tamin'izy ireo. Ny tranonkalanay dia tsy nankato ny fialan-tsasatr'izy ireo ihany, fa nanomana fety fankalazana manokana koa, hitahy azy ireo mandrakizay mandrakizay. Ny orinasanay dia manome lanja lehibe ny zon'olombelona sy ...
Tamin'ity volana ity izahay dia nanondrana vokatra goba 3 * 40 metatra ho any Eropa, Amerika atsimo, ary USA, kitapo fonosana plastika ary kitapo fivarotana azo zezika
Tamin'ity volana ity izahay dia nanondrana vokatra goba 3 * 40 metatra ho any Eropa, Amerika atsimo, ary Etazonia, kitapo fonosana plastika ary kitapo fivarotana azo zezika. Izahay izao dia manatri-maso fahalianana mitombo amin'ny fampihenana ny fampiasana plastika nentim-paharazana, na an'ny mpanjifa, indrindra fa ny mpanao politika koa. Maromaro ...
Ny orinasan-tsika dia nampiditra masinina sy fitaovana vaovao tamin'ny desambra 2020
Ny orinasan-tsika dia nampiditra andiana milina sy fitaovana vaovao tamin'ny desambra 2020, ao anatin'izany ny milina mitsoka horonantsary 2 *, milina fanontana 1 ary milina fanaovana kitapo 3. Amin'ny maha orinasa lehibe anao ao amin'ny indostrian'ny kitapo biodegradable, nitombo ny baiko, ary mba hihaona amin'ny filan'ny mpanjifa, .. machiner ...